NOSY BE : Nisy nikasa hanakantsakana ny fandalovan’ny kandidà Andry Rajoelina
Misy hatrany ireo mikely aina fatratra manao izay haminganana ny kandidà Andry Rajoelina laharana faha-13. 15 octobre 2018
Efa ao anatin’izao fampielezan-kevitra izao dia mbola mandeha ihany ny politika maloton’ny sasany hanakantsakanana ny fahafahan’ireo kandidà mitety faritra izay zo feno ananany ao anatin’izao andron’ny fampielezan-kevitra izao.
Ny zoma maraina lasa teo no nitsidika sy nitafa mivantana tamin’ireo mponina tao Nosy Be ny kandidà Andry Rajoelina laharana faha-13. Misy tsy mahazaka sahady izay mety ho fahombiazany tao an-toerana anefa ireo mpikambana avy amina antoko hafa, ka nitady ny hevitra rehetra mba tsy hahatontosa io fihaonany mivantana tamin’ny vahoakan’i Nosy Be io. Ny fanamafisam-peo hampiasain’ny kandidà Andry Rajoelina mandritra ilay famoriam-bahoaka no fantatra fa nosakanan’ny olon’ny antoko Hvm. Ilay fitaovam-pitaterana tokony hitondra ireo fanamafisam-peo hanatanterahana ilay fampielezan-kevitra niainga avy eo Ankify hihazo ny tanànan’i Nosy Be no lasibatra tamin’izany.
Araka ny vaovao voaray dia nahodin’ilay mpikamban’ny HVM hitondrana mpitsangantsangana tamin’ny toeran-kafa ilay baka tokony hitondra ilay kamiao mitatitra ireo fanamafisam-peo. Tra-pahasahiranana araka izany ireo olona nomena ilay andraikitra hitatitra ireo fanamafisam-peo ireo. Nandray ny andraikitra avy hatrany ny solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tao Antsiranana, Jocelyne Maxime nanoloana ity tranga ity. Ny tenany no niditra an-tsehatra nitady vahaolana ka tsy tanteraka tamin’ny ora farany ny teti-dratsin’ireo mpanakorontana.
Niala maina ireo nikasa hitondra rivotra ratsy ho an’iny fampielezan-kevitra notontosain’ny kandidà Andry Rajoelina tany Nosy-Be iny. Tontosa soa aman-tsara ny fihaonany tamin’ny vahoaka, babony tanteraka ny fon’ny vahoakan’i Nosy-Be na hatramin’ireo olona nalefa hitsangantsangana aza dia tonga nanatrika ny famelabelarana nataony momba ireo vinan’ny fampandrosoana natokany ho an’ny tanànan’i Nosy-Be sy ireo vahoaka ao aminy.